Ezikiel 30 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
30 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị:
2 “Nwa nke mmadụ, buo amụma, sị,+ ‘Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Tienụ mkpu, sị, ‘Ewoo, ụbọchị ahụ na-abịa!’+
3 n’ihi na otu ụbọchị dị nso, ee, ụbọchị Jehova dị nso.+ Ọ ga-abụ ụbọchị ígwé ojii,+ oge a kara aka nke ndị mba ọzọ.+
4 Mma agha ga-abata n’Ijipt,+ a ga-enwekwa oké ihe mgbu n’Itiopia mgbe e gburu ndị mmadụ n’Ijipt, e wee buru akụ̀ ya, tidakwa ntọala ya.+
5 Itiopia+ na Pọt+ na Lọd na ìgwè mmadụ dum gwara ọgwa+ na Kọb na ụmụ nke ala ọgbụgba ndụ—a ga-eji mma agha gbukọta ha.”’+
6 “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Ndị na-akwado Ijipt ga-ada, ike ya nke na-ebu ya isi ga-adakwa.’+
“‘A ga-eji mma agha gbuo ha n’ime ya, malite na Migdọl+ ruo na Sayini,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.
7 ‘A ga-emekwa ka ha tọgbọrọ n’efu n’etiti ala dị iche iche a lara n’iyi. Obodo ya ga-adịkwa kpọmkwem n’etiti obodo dị iche iche a lara n’iyi.+
8 Ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova mgbe m ga-esunye Ijipt ọkụ, bibiekwa ndị niile na-enyere ya aka.+
9 N’ụbọchị ahụ, ndị ozi ga-eji ụgbọ mmiri si n’ihu m gawa, iji mee ka Itiopia, nke tụkwasịrị onwe ya obi, maa jijiji.+ Ha ga-enwekwa oké ihe mgbu n’ụbọchị a ga-ebibi Ijipt, n’ihi na, lee! ọ ga-abịarịrị.’+
10 “Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘M ga-eji Nebukadreza eze Babịlọn kpochapụ ìgwè ndị Ijipt.+
11 A na-akpọbata ya na ndị so ya, bụ́ ndị ọchịchị aka ike nke mba dị iche iche,+ ka ha mee ka ala ha bụrụ mkpọmkpọ ebe. Ha ga-amịpụtakwa mma agha buso Ijipt agha, meekwa ka ala ha jupụta ná ndị e gburu egbu.+
12 M ga-eme ka ọwa mmiri niile nke Naịl+ bụrụ ala akọrọ, werekwa ala ha resị ndị ọjọọ.+ M ga-ejikwa ndị mba ọzọ mee ka ala ha na ihe niile dị n’ime ya tọgbọrọ n’efu.+ Mụ onwe m, Jehova, ekwuwo ya.’+
13 “Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘M ga-ebibikwa arụsị ha ndị na-asọ oyi ka nsị,+ bibiekwa chi dị iche iche na-abaghị uru ndị dị na Nọf.+ A gakwaghị enwe onyeisi n’ala Ijipt; m ga-emekwa ka ụjọ dịrị n’ala Ijipt.+
14 M ga-eme ka Patrọs+ tọgbọrọ n’efu. M ga-esunyekwa Zoan+ ọkụ ma mee ihe e kpere n’ikpe n’obodo Noo.+
15 M ga-awụkwasị Sin ọnụma m,+ bụ́ ebe e wusiri ike n’Ijipt, bipụkwa ìgwè ndị Noo.+
16 M ga-esunye Ijipt ọkụ. Sin ga-anọrịrị n’oké ihe mgbu. A ga-emerikwa Noo site n’ịkwatu mgbidi ya; ma Nọf ga-enwe ndị iro n’ehihie!
17 A ga-eji mma agha gbuo ụmụ okorobịa Ọn+ na Paịbiset. A ga-adọrọkwa obodo ndị a n’agha.
18 Ụbọchị ga-agba ọchịchịrị na Tihafnihis,+ mgbe m ga-agbaji osisi yok Ijipt+ n’ebe ahụ. N’ime ya ka a ga-ebibi ike ya nke na-ebu ya isi.+ Ígwé ojii ga-ekpuchi ya,+ a ga-adọrọkwa obodo nta ya niile n’agha.+
19 M ga-eme ihe e kpere n’ikpe n’Ijipt;+ ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova.’”
20 O wee ruo n’afọ nke iri na otu, n’ọnwa mbụ, n’abalị asaa n’ọnwa ahụ, na okwu Jehova ruru m ntị, sị:
21 “Nwa nke mmadụ, m ga-agbaji ogwe aka Fero bụ́ eze Ijipt,+ ma, lee! a gaghị eke ya ákwà+ ma ọlị ka ọ laa wee dị ike ijide mma agha.”
22 “Ya mere, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Lee, m na-emegide Fero eze Ijipt,+ m ga-agbajikwa ogwe aka ya,+ ma nke dị ike ma nke a gbajiri agbaji.+ M ga-emekwa ka mma agha o ji n’aka dapụ.+
23 M ga-achụsasịkwa ndị Ijipt ná mba dị iche iche, chụsasịakwa ha n’ala dị iche iche.+
24 M ga-eme ka ogwe aka eze Babịlọn dị ike,+ m ga-enyekwa ya mma agha m.+ M ga-agbajikwa ogwe aka Fero, dị ka onye e merụrụ ahụ́ nke ukwuu, ọ ga-asụ ude nke ukwuu n’ihu ya.+
25 M ga-emekwa ka ogwe aka eze Babịlọn dị ike, ogwe aka Fero ga-ada; ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova mgbe m nyere eze Babịlọn mma agha m, o wee setịa ya buso ala Ijipt agha.+
26 M ga-achụsasị ndị Ijipt ná mba dị iche iche,+ chụsasịakwa ha n’ala dị iche iche; ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova.’”